Video Archives — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ဗီဒီယို ဗီဒီယို ဗီဒီယို ဗီဒီယို ဗီဒီယို ဗီဒီယို ဗီဒီယို ဗီဒီယို ဗီဒီယို ဗီဒီယို ဗီဒီယို ဗီဒီယို ဗီဒီယို ဗီဒီယို
တင့်တယ်ဘဝက "ပေါ်တွင်ခရီးစဉ် Lee က” မှ ဘုရားသခင့ငှါအလွန်တောင့ အပေါ် Vimeo.
ငါသည်ငါ့လတ်တလောအယ်လ်ဘမ်အဘို့ရေးထားပထမဦးဆုံးသီချင်း, “အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ” "တင့်တယ်ဘဝကလို့ခေါ်တဲ့သီချင်းခဲ့သည်။” ခွေငျးငှာအလိုရှိသောဘုရားသခငျကနောက်ကွယ်မှထိုသီချင်းကိုနှင့်ငါ့နှလုံးအကြောင်းငါ့ကိုမေးခဲ့တယ်. ဤတွင်သူတို့၏င် တစ်ခုလုံးကို blog post:.
ဒီမှာသီချင်းမှစာသားများမှာ, သော V ကိုတပ်ဆင်ထား. နှင်းဆီပန်း:
Living Move အသက်ရှု
သူက ပေး. ရတဲ့အခါ
တစ်ဦးကလေးသင်၏ဝမ်းထဲမှာရှိပါတယ်, သင်မူကားကြောင်း do ကြိုးစားနေမခံခဲ့ရ
သင်တစ်ဦးဘဝကိုတယ်သည်မဟုတ်, ပစ်ခတ်, အချိန်ကိုက်တကယ်မှန်သည်မဟုတ်
ငါဇာတ်လမ်းများစဉ်းစားခြင်းဖြင့်စတင်ဖို့ချင်. အချိန်ရဲ့အစအဦးကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံပြင်များမှတဆင့် run ကိုသိမှတ်ဘုံ themes များရှိခဲ့ပွီ. ကျနော်တို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံပြင်များရှိ, ဟာသ, နှင့်ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ဆိုး - သို့မဟုတ်ရင်ခုန်စရာဟာသအဖြစ်လူသိများတယောက်အတွက်သူအပေါင်း၏အရောအနှော. ဒါပေမယ့်ရုပ်ရှင်၏သူအပေါင်းမျိုးကိုဖြတ်ပြီး, နီးပါးအမြဲဖွင့်ပြသသောနှစ်ဦး themes များရှိပါတယ်: ကောင်းသောဒုစရိုက်.
သင်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ. Braveheart ခုနှစ်တွင်, စကော့တလန်နဲ့ William Wallace ကောင်းပါတယ်, အင်္ဂလန်ဘုရင်အက်ဒွပ်မကောင်းတဲ့နေစဉ်. Narnia ၏ရာဇဝငျခြုခုနှစ်တွင်လေးတွေနှင့် Aslan ကောင်းပါတယ်, နှင့်စုန်းမကောင်းဘူး. တောင်မှဒစ္စနေးရုပ်ရှင်များတွင်, အဲဒါအမှန်ပဲ. Aladdin ခုနှစ်တွင်, Aladdin နှင့် Genie ကောင်းပါတယ်, ဒါပေမဲ့ Jafar မကောင်းဘူး. သငျသညျ Aladdin အကြောင်းမသိရပါဘူးတူပြုမူကြပါဘူး.
ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျယရှေုအကြောင်းပြောဆိုရန်စတင်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏လူအကြောင်းပြောဆိုရန်စတင်သောအခါအတခါတရံတူညီအမျိုးအစားအတွက်စဉ်းစားသောအခါ. သူတို့ဟာဘုရားသခင်နှင့်မာရျနတျအကြားတစ်ဦးနတ်မင်းကြီးစစ်တိုက်အဖြစ်ဝဠာထင်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးပုံပြင်များနှင့်တူအားလုံး, ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရသူကိုကြည့်ရှုခြင်းငှါအဆုံးထားချက်အရင်. ယရှေုသညျဖွင့်ထားတဲ့ Is…
ငါသီချင်းဆို "ဒီကျူးကျော်များအတွက်ဗီဒီယိုတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ပါဘူးသောသူသည်သင်တို့အဘို့အသူတို့အား (သူရဲကောင်း)” ဒီမှာပါ. နှစ်သက်! ငါကခရစ်တော်ပေါ်တွင်သင်၏မျက်စိစောင့်ရှောက်ဖို့သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်.